Mangatsiaka nanakodia Steel Atrikasa
Mangatsiaka nanakodia coils dia novokarina tamin'ny hafainganam-pandeha avo 6Hi Rolling fikosoham-bary no sopplied anay amin'ny samy feno mafy sy annealed condition.Superior ambonin'ny mangatsiaka kalitaon'ny coils mamela malalaka ny fampiharana toy ny metaly substrate coating (tafo) galvalume, manta ara-nofo ho an'ny fantsona, tahaka ny fantsom-drum / av / vy fanaka sy ny hafa mampiasa injeniera ankapobeny.
Hot niara-nanatsoboka Galvalume vy Atrikasa
Galvalume vy coil dia vokatry izay tena mitovy amin'ny nandrisika vy fa amin'ny tsara kokoa harafesiny fanoherana (hatramin'ny in-3 ny fiainana ny tafo) .Ny supperior mampiavaka ny galvalume mitsangàna amin'ny tsy manam-paharoa sangan '(43.5% Zn, 1.5% Si, 55% AL ) ny metaly coating. Applications Anisan'ny fitaovana fototra ho an'ny tafo mialoha hoso-doko.
Hot niara-nanatsoboka nandrisika vy Atrikasa
Nandrisika Steel Coils no vokarina amin'ny alalan'ny dingana iray ny vy coating izay midika mandalo mangatsiaka nanakodia coils alalan'ny kettle misy ny zinc an-idina. Ity dingana ity no miantoka hidiran'i ny Zinc mba ho etỳ ambonin'ny taratasy ny vy. Ny Zinc Layer harafesiny dia manome tsara fanoherana sy ny asa fanompoana ho maro ny fiainana. Mandroboka Hot dia be tafo vokatra ampiasaina amin'ny tokantrano fitaovana, ny fitaterana, fitoeran-javatra orinasa mpamokatra entana, tafo, fitaovana fototra ho an'ny mialoha ny sary hoso-doko, sy ny hafa ducting fampiharana mifandraika fanorenana.
Color vy mifono Atrikasa
Mialoha voaloko coils dia novokarin'ny coating ny sosona ny loko eny ambonin'ny nanakodia mangatsiaka poakaty, ny tafo na galvalume coils. Hatsarana antso sy mateza no fototra mampiavaka ny loko vy mifono coils. Ny malalaka fifantenana ny loko tsy ampy ny mpanjifa sy ny loko natao mba hihaona manokana fampiasana farany azo voalaza. Ny mialoha nandoko coils dia tsara ho an'ny mivantana anatiny ary koa ny fampiharana ivelany, sandwich kobany sy ny sisa.
Corrugation Atrikasa-mitafo fanitso Roofing taratasy
Trano fanatobiana entana sy ny sambo